कला Archives - Page 63 of 65 - चौतारी पोष्ट अनलाइन
‘रातो टीका निधारमा’ ट्रेलर रिलिज, साम्राज्ञीको गाउँले भूमिका
प्रदर्शनरत फिल्म ‘मारुनी’ बाट लोभलाग्दो प्रशंसा बटुलिरहेकी अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाहले भेट्रान निर्देशक अशोक शर्माका छोरा अंकितसँग रोमान्स गरेको फिल्म ‘रातो टीका निधारमा’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । असोज १० गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्मले वैदेशिक रोजगारीको कथा वाचन गर्ने ट्रेलरले प्रस्ट्याउँछ । ट्रेलरमा देखाइए अनुसार अभिनेत्री साम्राज्ञीले यो फिल्ममा गाउँले युवतीको भूमिका निभाएकी छन् । उनले पहिलो पटक यस प्रकारको भूमिका निभाएकी हुन् । अंकित भने वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने एजेन्टको भूमिकामा छन् । कमेडी फ्लेवरमा तयार पारिएको ट्रेलरले फिल्मप्रति दर्शकमा उत्सुकता र कौतुहलता जागृत गर्न सफल हुने देखिन्छ । साम्राज्ञी र अंकितसँगै यस फिल्ममा नीता ढुंगाना, रविन्द्र झा, बुद्धि तामाङ, खुश्बु खड्का, राजाराम पौडेल, शिवहरी पौडेल, लक्ष्मी गिरी, बसुन्धारा भुषाललगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ ।
सांगीतिक यात्रामा यात्रारत पूजन र अनुपमा ईमेज अवार्डमा मनोनयन !
जिवनको यात्रामा मनसँग मन मिलेर त्यहि मनबाट स्निग्ध र निश्छल प्रेम जन्मेर जिवनको यात्रामा यात्रारत पूजन ल्वागुन र अनुपमा प्रधान जिवनका साथीहरु मात्र होईनन् नेपाली पन , नेपाली मन र जिवनको पाटोको कथा गाउने युगल जोडीहरु पनि हुन् भन्ने लाग्छ । मनसँग मनको मेल भएर उनीहरु दाम्पत्य जिवनमा कसिएका त हुन्नै तर मलाई लाग्छ संगीतप्रति अधाग स्नेह र झुकावको उनीहरु दुुबैको अर्को अन्तरमनको आकषर्णले पनि यो जोडीलाई जिवन साथी बनाउन कम भूमिका खेलको छैन होला । मेचीको किनारबाट धेरै पर भएर पनि नेपाली गीत र संगीतलाई पलपल धड्कन बनाएर मरिहत्ते गर्ने यो जोडीको साँच्चै नेपाली गीत संगीतप्रतिको चिन्तन र चिन्ता गजबको लाग्छ । आफ्नो नित्यकर्मको थोरै फुुर्सदको समयमा पनि कसरी सुन्दर सृजना जन्माउने र जन्मिएको सृजनालाई सांगीतिक न्यायको रङ्रोगनले सजाउने उनीहरु छलफल गर्छन् । सांगीतिक धारकै कुरा गर्दा पूजन संगीतकार हुन् र अनुपमा ग
हलिउड फिल्म ‘लार्जो विन्च’ को कपी हो ‘साहो’ ?
प्रभास र श्रद्धा कपूरको मल्टीस्टारर फिल्म ‘साहो’ ले बक्सअफिसमा तगडा विजनेश गरिरहेको छ । हिन्दी भर्सनमा मात्र फिल्मले प्रदर्शनको चार दिन ९३ करोड २८ लाखको व्यापार गरेको ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शले ट्विटमार्फत् जानकारी दिएका छन् । तर, फिल्मको माउथ पब्लिसिटी निकै कमजोर छ । जसका कारण फिल्म लामो रेसको घोडा बन्न नसक्ने देखिन्छ । अहिले यो फिल्म हलिउडको ब्लकबस्टर फिल्म ‘लार्जो विन्च’ को कपी रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भइरहेको छ । हजारौंले सामाजिक सञ्जालमा यस प्रकारको ट्वीट गरेपछि यसका निर्देशक जरोम सलेले यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले ‘लार्जो विन्च’ को दोस्रो निःशुल्क निर्माण खराब रहेको बताएका छन् । उनले तेलूगु निर्देशकलाई आफ्नो काम चोरेता पनि सही ढंगले गर्न आग्रह गरेका छन् । योभन्दा अगाडि पनि त्रिविक्रम श्रीनिवासमाथि जरोमले आफ्नो फिल्मको रिमेक गरेको आरोप लगाएका थिए
मिस आदिवासी जनजाति झापा -२०७६ काे उपाधि कुसुमलतालाई
मिस आदिवासी जनजाति झापा -२०७६ काे उपाधि हल्दिवारी गाउँपालिका वार्ड नं३ कि कुसुमलता राजवंशीले हात पारेकी छिन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय समिति भद्रपुरकाे आयाेजनामा हाेटल एभरेटमा शनिवार भएकाे ग्राण्ड फिनालेमा उपाधिसंगै नगद रू ५१ हजार र गिप्ट ह्याम्पर जितेकी छिन् । बुबा यानसिंह राजवंशी र आमा सावित्री राजवंशीकाे काेखबाट जन्मिएकी कुसुमलता सामान्य परिवारकी हुन् । उनी उपाधिसंगै नगद २५ हजार रूपैयाँ जितेेेेकी छन् भने सेकेन्ड रनर अफ अर्चिता गुरूङ्गले जितेकी छिन् । उनी नगद रू १५ साथै थुप्रै गिफ्ट ह्याम्पर हात पारेकी छन् । कृषि राज्यमन्त्री राम कुमारी चाैधरीकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा प्रदेश सभासद वसन्त बानियाँ, पुर्ण सिंह राजवंशी, ओमप्रकाश सरावगी, भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवन कुमार श्रेष्ठ, बाह्रदशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रत्ना कुमारी राजवंशी, झापा उघाेग संघका अध्यक्ष टीक
पवन कल्याणको पारिश्रमिक एक फिल्मको १८ करोड
साउथ सुपरस्टार पवन कल्याणको आज (सोमबार) ४८ औं जन्मदिन हो । उनको जन्म २ सेप्टेम्बर १९७१ मा बापतलाको आन्ध्र प्रदेशमा भएको थियो । उनी ती एक्टर्समा सामेल छन्, जसले अभिनयपछि राजनीतिमा कदम राखे र २०१४ मा आफ्नो पार्टी पनि बनाए । पवनले फिल्म इन्डस्ट्रीमा २३ वर्ष विताइसकेका छन् र अहिलेसम्म उनले २३ फिल्म मात्र गरेका छन् । उनी एक फिल्मको लागि १८ करोड पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । उनी सन् २०१४ कै बेला गूगलमा सबैभन्दा बढी सर्च गर्ने सेलिब्रेटी राजनीतिज्ञ पनि बनेका थिए । फिल्मी करिअरको कुरा गर्ने हो भने उनले अभिनयको सुरुवात तेलुगू फिल्म 'अककडा अम्माई इककडा अब्बाई' बाट गरेका थिए । उनी साउथका सुपरस्टार तथा राजनीतिज्ञ चिरञ्जीवीका कान्छा भाई समेत हुन् । उनले अहिलेसम्म तीन विवाह गरिसकेका छन् । पवनको पहिलो विवाह नन्दिनीसँग भएको थियो । यो सम्बन्ध १९९७ देखि २००७ सम्म चलेको थियो । दोस्रो विवाह रेणु देसाईसँग
‘मारुनी’ हेरेपछि सेलिब्रेटीले भने- ‘उम्दा फिल्म’
शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको नवल नेपाल निर्देशित पारिवारिक प्रेमकथामा आधारित भएर निर्माण भएको फिल्म ‘मारुनी’ ले हलमा दर्शकको खासै राम्रो साथ पाउन सकेको छैन । एकसाथ प्रदर्शनमा आएको साउथ सुपरस्टार प्रभास अभिनीत फिल्म ‘साहो’ ले यो फिल्मको व्यापारमा ठूलो असर गरेको छ । यद्यपि, फिल्मको ‘वर्ड अफ माउथ’ बलियो छ । समीक्षक र दर्शक दुबैले फिल्मको तारिफ गरेका छन् । पुरूष भएर जन्मिएकी तर लिङ्ग परिवर्तन गरेर युवती बनेकी एक ‘ट्रान्सजेन्डर’ पात्रको प्रेमकथा वाचन गर्ने यो फिल्म सेलिब्रेटीलाई पनि निकै मन परेको छ । आइतबार साँझ कुमारी हलमा फिल्म हेर्न नाम चलेका सेलिब्रेटीहरुको बाक्लो भीड लागेको थियो । फिल्म हेरेपछि कोही कथावस्तु र कलाकारको अभिनयको प्रशंसा नगरि बस्न सकेनन् । दोस्रो पटक ‘मारुनी’ हेरेका अभिनेता भुवन केसीले फिल्म मनछुने रहेको बताए । यो फिल्मले उठाएको विषयवस्तुमा अरु मेकरले फिल्म बनाउने आँट नग
‘मेलै बुझेको संगीत मेरो आमा हो, म संगीतलाई त्यही सम्मान गर्छु ’ संगीतकार पुजन ल्वागुन
नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा जिवन र जगतको भोगाईलाई टपक्क टिपेर मिठास धुनमा मनसँग मनजोड्ने संगीतकार हुन् पुजन ल्वागुन। अक्सर जिवन र जगतको सम्बन्ध भएका गीतहरुमा संगीत भर्न मनबाटै तत्परता देखाउने पुजन नेपाली सांगीतिक फाँटका एक आशाका दीपक पनि हुन् । बाल्यकालबाटै बालगायकका रुपमा सांगीतिक दुनियाँमा ओर्लेका उनी संगीतको दुनियाँम आउनुको कारण भने उनको सानैदेखिको रुची र पारिवारिक सांंगीतिक वातारण भएको पुजन बताउँछन् । भर्खरै मात्र श्रोता समक्ष आएको लाचार बादल नामको सांगीतिक कोशेलीबाट चर्चामा आएका उनै संगीतकार पुजन ल्वागुनसँग गरीको सक्षिप्त सांगीतिक कुराकानी । संगीत क्षेत्रमा तपाई कहिलेदेखि सकृय हुनु भयो ? म केवल ७ वर्षको उमेर हुँदा पहिलो पल्ट स्टेजमा गायकको रुपमा निस्किएको थिएँ। घरमा पनि सांगितिक माहोल थियो, मेरो बाजे एकदल राम्रो मादल बादक साथै गायक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सोरटी , संगिनी, अन्य लोक गी
मेचीनगर तीज नृत्य प्रतियोगिताको उपाधी खुट्टिडाँगी महिला समुहलाई
प्रतियोगितामा बिजयी हुने मेचीनगर ९ को खुट्टिडाँगी महिला समुह । काकरभिट्टा रेडियो साथी ९८.६ मेगाहर्ज काकरभिट्टाले आयोजना गरेको मेचीनगर तीज नृत्य प्रतियोगिता २०७६ को उपाधी खुट्टीडाँगी महिला समुह मेचीनगर ९ ले जितेको छ । मेचीनगर ६ स्थीत काँकरभिट्टा खानेपानी संस्थाको सभाहलमा आज सम्पन्न फाइनल प्रतिस्पर्धामा मेचीनगर ६ को मखमली महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दोस्रो भएको छ । त्यस्तै मेचीनगर १ को सञ्जीवनी महिला बिकास संस्था तेस्रो र मेचीनगर १३ को चारआली टोल बिकास संस्थाले सान्त्वना स्थान हासिल गरेको प्रतियोगिताका मुख्य निर्णायक तथा नृत्य कलाकार संघ झापाका अध्यक्ष लोकचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । प्रतियोगितामा पहिलो हुने समुहले नगद २५ हजार, दोस्रो हुनेले १५ हजार, तेस्रोले १० हजार र सान्त्वना स्थान हासिल गर्नेले ५ हजार र प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको रेडियो साथीका कार्यकारी निर्देशक ज्ञानेन्
‘गुञ्जन’ मा साराको जोडी प्रितम
दुई दशक लामो द्वन्द्व निर्देशकको रुपमा संगालेको अनुभवलाई सर्टिफिकेट मान्दै अष्ट महर्जनले फिल्म निर्देशनमा डेब्यू गरेका छन् । उनको क्याप्टेनसिनमा फिल्म ‘गुञ्जन’ को अहिले पोखराको विभिन्न रमणीय स्थानमा छायांकन भइरहेको छ । द्वन्द्व निर्देशकको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेका अष्टले यो फिल्म लभस्टोरी जनरामा निर्माण हुने बताएका छन् । यही फिल्मबाट प्रितमराज सेन्चुरीले नायकको रुपमा रुपमा डेब्यु गर्दैछन् । फिल्ममा उनको जोडीका रुपमा अभिनेत्री सारा सिर्पाली छिन् । बिन्दवासीनी मन्दिरमा शुभ मुहूर्त गरि सुटिङ सुरु गरिएको फिल्ममा प्रितमराज र साराका साथमा सरोज खनाल, हिउँवाला गौतम, कविर खड्का, रोहन शाही, निरुता स्याङताङ, कन्चन चालिसेलगायतका कलाकार छन् । हिराकृष्ण शाहीको प्रस्तुति र सुनीता शाही निर्माता रहेको फिल्मको छायाँकार राजेश श्रेष्ठ हुन् । ए. एच इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानर बन्ने फिल्मको स्क्रिप्ट महेश दव
शनिबार ‘मारुनी’ को आशातित व्यापार
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र अभिनेता पुष्प खड्का अभिनीत फिल्म ‘मारुनी’ ले शुक्रबारको तुलानामा शनिबार केही आशातित व्यापार गर्न सफल भएको छ । मल्टीप्लेक्समा साउथ सुपरस्टार प्रभास अभिनीत फिल्म ‘साहो’ को चेपुवामा परेको यो फिल्मले सिंगल स्क्रिनमा भने दर्शकको उल्लेख्य साथ पाएको वितरकको दाबी छ । शनिबार फिल्मले देशैभर हाउसफुल दर्शक पाएको जानकारी प्राप्त छ । फिल्मको व्यापार सिंगल स्क्रिनमा राम्रो छ । निर्मात्री पुनम गौतका अनुसार, शनिबार काठमाडौंका मल्टिप्लेक्सका केही शोजमा फिल्मको अकुपेन्सी ९० प्रतिशतसम्म देखिएको छ । शनिबार बिहानैदेखि मध्यम वर्गीय दर्शकको सर्वाधिक चाप रहने राजधानीका गोपीकृष्ण, अष्टनारायण, गुण, गंगालगायतका हलमा फिल्मले हाउसफुल व्यापार गरिरहेको वितरकले बताएका छन् । ‘वर्ड अफ माउथ’ बलियो भएका कारण फिल्म लामो रेसको घोडा बन्नेमा निर्माण टिम पूर्ण विश्वस्त छ । शनिबार द